> Resource > masixi > Sida loo masixi / masax ah Barzakh on Hard disk
Mararka qaarkood, virus computer ka iyo aad u badan ay adag tahay in meesha laga saaro waa. Waxay gudbiyaan oo si deg deg ah in barnaamijka anti-virus ma dili karaa iyaga si fiican u qaadsiin. Markaas sida loo helo meel nadiif ah u reinstalling Windows iyo barnaamijyada oo looga hortago infakshanka fayraska? Haddii aad ku dhibeen la oo aan fahmi karaa xal wax ku ool ah. Waxaad tahay meesha hadda. Tani waa article saxda ah in uu kuu sheegayaa sida aad u masixi ama tirtiri xijaab cayiman si ay u hesho meel bannaan oo gebi ahaanba nadiif ah.
Sida loo tirtir / masixi ah Barzakh, Gebi
Marka hore, waxaad u baahan tahay si aad u hesho Wiper parition ama tirtire: Wondershare LiveBoot . Wiper xijaab wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si buuxda u masixi ku jira oo dhan xijaab, oo ay ku jirto faylasha virus madax adag oo files maqan. Waxaa intaa dheer, waxa ku jira tirtirayaa by barnaamijkan la kama uusan soo kabsan karaan wax xal kabashada xogta. Waxay kuu siinayaa daafaca ah xijaab Gaarna nadiif ah nidaamka cusub ama data cusub.
Step1. Guba LiveBoot galay Downlaods CD / USB drive
Si loo hubiyo in tani ay howlgal Tirtirin xijaab ma saameyn doono virus kasta, marka hore gubi barnaamijkan galay baabuur Downlaods CD / USB.
Burcad barnaamijka iyo waxaad heli doontaa interface ee soo socda. Geli CD ama drive USB in kombiyuutarka ah, ka dibna riix badhanka gubatay. Waxyaalahan oo dhan ayaa ka tagay ayaa la sameyn doonaa si toos ah (waxaa looga dhisay-in gubi iyo mid dheeraad ah ma loo baahan yahay).
Step2. Computer Boot ka LiveBoot
Hadda kabaha your computer la gubay Downlaods CD / USB. Waxaa Geli in computer ka iyo waxa la bilaabi. Marka nidaamka bilaabmin, F12 jaraa'id si aad u hesho "ayuu menu Boot" oo ay doortaan in ay kabaha ka CD-ROM. Markaas waxaad heli doontaa menu kabaha soo socda. Guji "Boot ka LiveBoot". Hadda aad galaya deegaan gebi nadiif ah oo ammaan ah.
Step3. Ha ogolaan in xijaab
Kadib markii ay LiveBoot ah, u tag "Management Disk" iyo dooran "Wiper ah Barzakh," hoos "Ha ogolaan in Data". Halkan waxa aad ka wip kartaa dhammaan xogta laga hadlo xijaab cayiman. Hubi in aad dooranayso xijaab xaq, maxaa yeelay, xogta halkan ku qoysay oo aan la soo kabsaday karaa hab kasta.
Marka Risaalo ka tirtira gool, you'are qaadan xijaab quruxsan nadiif ah oo isticmaalin karo ee u heelan nidaam cusub ama kaydka xogta cusub.